विद्युत चुहावट घटाउँदा प्राधिकरणको कमाइ ७ अर्ब -
विद्युत चुहावट घटाउँदा प्राधिकरणको कमाइ ७ अर्ब
२४ माघ २०७५, बिहीबार February 7, 2019 गोक्यो संवाददाता0Comments
काठमाडौँ : विद्युत् चुहावटमा लक्ष्यभन्दा बढी सफलता मिलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा विद्युत् चुहावट प्रतिशत १५.४५ प्रतिशतमा झरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा औसत विद्युत् चुहावट २० दशमलव ४५ प्रतिशत थियो । यो आर्थिक वर्षमा चुहावट साढे १८ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य थियो । पहिलो ५ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । चुहावट कम गर्न प्राधिकरणले आफ्नो विभिन्न वितरण केन्द्रलाई फरकफरक लक्ष्य दिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत् चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
← नेकपाको एकीकरण कार्यदलभित्रै चर्को असन्तुष्टि
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : असारमा परीक्षण उडान →
सेयर बजारबाट गुमाउनेमा जुकरबर्ग १ नम्बरमा, कति गुमाए ?
११ चैत्र २०७४, आईतवार गोक्यो संवाददाता 0
एनसीसी बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका दुई शाखा स्थानान्तरण
१५ चैत्र २०७४, बिहीबार गोक्यो संवाददाता 0